Sababta ay Puntland ku waydey xubinta Guddiga Dastuurka oo sharraxaad yaab leh laga bixiyey | Hadalsame Media
Home Maqaallada Sababta ay Puntland ku waydey xubinta Guddiga Dastuurka oo sharraxaad yaab leh...
Sababta ay Puntland ku waydey xubinta Guddiga Dastuurka oo sharraxaad yaab leh laga bixiyey
(Muqdisho) 21 Juun 2022 – Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee DF Somalia ayaa ansaxiyey xubnaha Aqalka Sare ku matalaya Guddiga Dib-u-eegista Dastuurka Federaalka ah ee Somalia.
Xubnaha la ansixiyey oo 5 qof ka kooban ayaa magacyadooda laga waayey qof ka socda Maamulka Puntland iyo maamullo kale, balse siyaasiyiin iyo shacab ayaa aragtiyo saluug ah durba ka dhiibtey.
Maxamuud Bashiir Jaamac oo ka mid ah dadka wax ku qora Hadalsame Media islamarkaana kasoo jeeda degaankaasi, aadna ula socda arrimaha Puntland, ayaa qoraalkan kooban ku sharraxaya sababta uu arko inay Puntland wax ku waydey.
“Haddii aan markii hore, Aqalka Sare ku soo darsan lahayn Sanatar matalaya Beesha 5-aad, maanta Xaaji Iftiin Baastoow xubin guddi iskuma haysanneen ee bannaankay noo olaan lahayd, haddii Ilaahay kuu idmahayo,” ayuu ku bilaabay.
“Puntland haddii ay rabto in Guddiyada iyo Hay’adaha dowladda ay saami xooggan ka hesho waa taqaanaa jidka ay u mari lahayd, ee dhibaatadu waa in aan Puntland oo idil wax loo raadinahayn,” ayuu raaciyey.
Jaamac ayaa iftiimiyey sida ay Puntland ugu dulman yihiin dad badan oo halkaa ku dhaqan oo aan metelaad micne leh lahayn.
“Lix Beelood oo ku abtirsada Beesha 5-aad ayaa Puntland dega oo saami xooggan ka keeni lahaa arrimahan.” Ayuu ku dooday.
Previous article”Dagaal baa la iclaamiyey!” – Fal-celin durba ka timid xubnaha dib-u-eegista Dastuurka ee la ansixiyey
Next articleAmiirad ka tirsan Boqortooyada UK oo xaalad kacsan gashay kaddib markii ay biqleeyeen fardihii gelbinayey + Sawirro